USB na ngwaọrụ ndị nnọọ ike ngwaọrụ iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ-nyere onye ọrụ na nke a na data nchekwa bụ mgbe otu ihe iseokwu na niile. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ihe kasị mma USB a họọrọ na nke a nke na-maa metụtara àgwà nke mbanye na a na-họọrọ. Ọ bụ-kwuru ọtụtụ ndị ọrụ na-aga mgbe eriri mbanye na-eche na ibu dị mma maka ha mgbe n'ezie na ọ bụ na ọtụtụ ndị ikpe ma ọ ga-kọwara zuru ezu na na akụkụ ikpeazụ nke a nkuzi dị ka ọ pụrụ na-ahuta ka a zuru okè na-azụ ahịa ndu maka ndị na-chọrọ inwe ndị kasị mma amụọ na nke a.
Development nke USB flash mbanye size na-adịbeghị anya
Oghere Usoro ahụ na yiri ọdụ ụgbọ mmiri ndị bụ isi na ọkaibe ọrụ na e ji tupu mmepe nke USB flash mbanye. Ke Ruth nke ọganihu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ na ojiji nke USB ngwaọrụ bụ ihe a chọrọ na a zuru n'ụzọ na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na USB interface ma ọ bụ version 1.0 debuted n'afọ 1995. Nke a version agafere data na ọsọ nke 12 MB / s na e ji na ekele site ọrụ aka akwa ịgbatị. Ọ bụ ya mere na--ahụ kwuru na USB interface 1.1 bufee data na a zuru ọsọ nke 12 MB / s na ndị ọzọ atụmatụ ndị na ala bandwit na-akwado otú ngwaahịa a e ji mee ihe ka tụnyere buuru onye uzo. Mgbe anyị na-ekwu banyere ugbu a na nmepe mgbe ahụ USB 2.0 interface na oru na n'afọ 2000 na USB 3.0 e na nso nso ulo oru na a ibu ọsọ nke 4.8 GB / s.
Ndị kasị yiri nke na mmepe nke USB flash mbanye bụ na mbụ nwe nke ngwaọrụ ndị na dịghịkwa ebe a hụrụ na ụlọ ọrụ ọ bụla na-ekwu na mbanye e mepụtara site na ha ma ọ bụ ha bụ ndị na-mepụtakwara a dị oke egwu gadget. The ọnụ ọgụgụ ndị mere anya na niile na ya mere ha nwere ike ghara adade ke kasị mma n'ụzọ. Nanị stats na dị ma ọ bụ nwere ike kwukwara na n'etiti USB 1.0 na USB 3.0 na version na ka na-eji ie USB 2.0 na oru iji jide n'aka na nke ibu data transfer ọsọ na-enwe enweghị ihe ọ bụla nke na nchekwa na-nwekwara ụba nke ugbu a na-enye ohere onye ọrụ na-echekwa 256GB nke data na otu mbanye. The n'okpuru table e si http://www.ebay.com/gds/Guide-to-Choosing-USB-Flash-Drives-/10000000177629671/g.html akọwa ọnọdụ na nke kacha mma n'ụzọ:
Flash Drive Ọgbọ
Flash draịva na-akpa kwadebere maka azụmahịa ire ere na 2000, na nwere nchekwa ikike nke nanị ole na ole MB. Nke a mbụ ọgbọ nke flash draịva nwere mgbanwe dị obere nchekwa maka ya oge, ma e ngwa ngwa eclipsed na okwu nke ọrụ na nchekwa ikike.
Abụọ (USB 2.0)
Nke abụọ ọgbọ nke USB flash draịva Enyele vastly mma transfer udu na budata ukwuu nchekwa omimi karịa nke mbụ ife. Upper-ọgwụgwụ Flash 2.0 draịva nwere ike nke na-ede data na fọrọ nke nta 20 ugboro ọnụego nke ndị mbụ nkeji, na-enwe ike iji chekwaa ọtụtụ GB kama MB.
Atọ (USB 3.0)
USB 3.0 flash draịva ọzọ na-enye n'ọkpụite abawanye na nchekwa ikike ma nyefee ọnụego n'elu ha ụzọ, na-enwe ike ịgụ na ide data na odika ugboro 10 na ọnụego nke 2.0.
Ibu bụghị mgbe niile ka mma
Nke a bụ eziokwu dị ka ndị mmadụ na-aga n'ihi na nnukwu nchekwa ngwaọrụ na-ukwuu ọnụ na-eche na ha nwetara ndị kasị mma nke na eziokwu bụ nnọọ ukwuu karịa ihe a chọrọ. The nkezi price nke USB na dị na ahịa bụ dị ka ndị. Ọzọ, ọ na-siri ọnwụ na onye ọrụ ga-aga n'ihi na n'ozuzu atụmatụ na-agbakwunyere na kwesịrị mgbe aga maka ụlọ ọrụ aha na ama:
1. 8GB efu na nkezi $ 5
2. 16GB na nkezi akwụ ụgwọ $ 8 ka $ 10
3. 128GB efu dị ka $ 30
4. 64 GB efu banyere $ 18
5. 64 GB na USB 3.0 interface efu $ 23 na nkezi
N'akuku nchekwa na price onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ ihe na-atụle na nke a ga-eme ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe arụmọrụ na-enwe na nke kacha mma n'ụzọ na na aka nke ọzọ ọ ga-azọpụta ndị na-eri maka onye ọrụ na onye ga-ekwe ka mgbe ahụ iji nweta ihe kasị mma amụọ n'ime oge ọ bụla ma ọlị.
1. The File transfer ọsọ kwesịrị ịbụ mbụ ihe a ga-atụle.
2. The oke n'etiti 2.0 na 3.0 ọgbọ ga-mere na-elekọta
3. Onye ọrụ kwesịrị ịhọrọ a ngwaọrụ na-eme ka n'aka na data ụdị na ohere bụ a ga-atụle na mmekọrita nyefee.
Olee otú ịhọrọ nri USB iji?
Ọ bụkwa otu n'ime ndị kasị dị mkpa akụkụ na a ga-atụle nke a na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na iji nweta ndị kasị mma isi ihe na e kpọrọ aha n'okpuru na-abụghị nanị na-atụle ma na-na-etinyere iji jide n'aka na ihe ga-esi bụ otu n'ime ndị kasị mma na onye ọrụ na-akawanye mma niile ugboro na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na USB mbanye na a na-zụrụ dị na akara na chọrọ nke faịlụ ndị a ga-agafere dị ka enweghị ikpe nke chọrọ ọ gaghị ekwe omume na nke kacha mma na ọkaibe N'ihi na nke a. Isi ihe ndị dị ka ndị:
Data transfer ọsọ
Nke ugbu a USB interface 3.0 na-akwado ndị data transfer ọnụego nke ruo 4.8 GB / s na maka otu ihe ahụ ọ na-gwara iji jide n'aka na USB ngwaọrụ bụ zụrụ dị ka kwa mkpa na ọ bụrụ na e mere mgbe ahụ, ọ bụ na--kwuru na onye ọrụ ahụ mere ndị kasị mma na ya na usoro nke ahụ bụ un ojiji. Nke a data transfer ọsọ ga-emetụta ọrụ ahụ a na-eme na nke a.
Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na a ebughibu na sleek imewe a họọrọ na nke a na onye ọrụ ọkọkpọhi arụpụta ihe kasị mma na nke a site na-eme n'aka na usoro chọrọ na ọnyịnye na-ekpe ikpe na nke a. E nwere USB draịva nke nwere ihere imewe na ya mere ha ike a mmekpahu kama a na-enyere aka na Ya mere onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma e mere ka usoro chọrọ site n'ịhọrọ a USB na ọkụ na-egbo mkpa.
Gịnị bụ ọkacha mmasị gị size nke flash mbanye?
too ogologo. 128GB
Olee otú naghachi ehichapụ ọ bụ furu efu faịlụ site na gị flash mbanye na Mac
> Resource> Flash Drive> ibu karịa ibu - Gịnị size maka a USB flash mbanye eme gị mkpa